Melero ၏ Meander, သဘာဝတရား၏စစ်မှန်တဲ့ချထားသော | ခရီးသွားသတင်း
လူးဝစ် Martinez | | ခရီးသွားလုပ်ငန်း, Espana
အဆိုပါ Melero ၏ meander သဘာဝတရား၏ချထားသော, အဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သင်က meander one လို့ခေါ်တယ် ချောသောကွေး တစ်ခွက်နှင့်ခုံး၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအရွက်မဆိုမြစ်၏။
ဒါပေမယ့် Melero ၏ပြောသောကွေးသော Alagónမြစ် အလွန်အမင်းအပြစ်ကြီးသောကြောင့်ကျွန်းငယ်တစ်ကျွန်းပေါ်ပေါက်လာသည်။ မည်သည့်ကိစ္စတွင်မဆိုတောရိုင်းပတ်ဝန်းကျင်နှင့်သဘာဝအတိုင်းအကောင်းဆုံးနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်သောထူးခြားသောရှုခင်းကိုဖန်တီးပါ။ သင်ပြည်နယ်၏ဤရတနာသွားရောက်ကြည့်ရှုလိုလျှင် Cáceresဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်တိုက်တွန်းပါသည်။
1 Melero ၏ meander ဘယ်မှာလဲ
2 Melero ၏ meander အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲ
2.1 တိရိစ္ဆာန်ရှာဖွေခြင်း: ဖို
3 ဘူမိဗေဒနည်းနည်း - အမဲလိုက်ကိုမည်သို့ဖွဲ့စည်းခဲ့သနည်း
4 Melero ၏ meander ကိုဘယ်သွားရမလဲ
5 Melero meander ပတ်ပတ်လည်ဘာလုပ်ရမလဲ
Melero ၏ meander ဘယ်မှာလဲ
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုဒီသဘာဝအံ့သြဖွယ်ရာကိုတွေ့လိုက်ရတယ် Castilla y Leónနှင့်အတူ Extremadura ၏ကန့်သတ်။ ပို၍ တိကျစွာပြောရလျှင်၎င်းသည်ကက်စ်ရေ့ဒေသတွင်တည်ရှိသည် Las Hurdes။ အနီးဆုံးမြို့ပါ Ríomalo de Abajo, အလှည့်အတွက်၏မြှို့နယ်ပိုင် Morisco လမ်း.
ထို့ကြောင့် meander ကိုရောက်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းမှာရီမီလိုမှဖြစ်သည်။ တစ်ဖန်ထိုမြို့ကိုရောက်ရန်သင့်တွင်ခရိုင်လမ်းနှစ်ခုရှိသည်။ သင်မြောက်ဘက်မှခရီးထွက်လျှင်သင့်တော်သောနေရာဖြစ်သည် လုပ် SA-225တောင်ဘက်ကနေလုပ်ရင်၊ ယူမယ် EX-204။ Ríomaloကိုရောက်တာနဲ့မင်းမှာaသစ်တောလမ်းကြောင်း အဲ့ဒါက Melero ရဲ့ meander ဆီကိုသင်တိုက်ရိုက်သွားမှာပါ။
Melero ၏ meander အတွက်ဘာလုပ်ရမလဲ
ယုတ္တိနည်းအရ၊ meရာဝတီတိုင်း၌သင်လုပ်နိုင်သည်မှာပထမဆုံးဖြစ်သည် ၎င်း၏အံ့သြဖွယ်ရှုခင်းကိုခံစားပါ။ ဤသို့ပြုရန်အကောင်းဆုံးတည်နေရာအချက်မှာခေါ်သည့်ရှုထောင့်ဖြစ်သည် အဟောင်းခင်ဗျားမှာဒီသဘာဝအံ့ဖွယ်အမှုရဲ့ပြီးပြည့်စုံတဲ့ရှေ့ရှုထောင့်ရှိတယ်။
သို့သော် Melero ၏ meander သို့သင်၏လည်ပတ်မှုသည်သင့်အားအခြားဖြစ်နိုင်ခြေများစွာကိုလည်းပေးထားသည်။ Ríomalo de Abajo မှထွက်ခွာပြီးမကြာမီတွင်သင်သည်ခမ်းနားထည်ဝါစွာတွေ့လိမ့်မည် သဘာဝရေကန် ဒါက Ladrillar မြစ်ကိုစီးဆင်းစေပြီးသင်အနားယူရန်ရေချိုးနိုင်သည်။
ထို့နောက်အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောရှုထောင့်သို့ရောက်ရန်ထင်းရှူးပင်နှင့်သစ်အယ်သီးများကြားရှိလမ်းကြောင်းကိုသင်လိုက်လျှောက်နိုင်သည်။ ဤသည်၌တစ်ချိန်ကသင်သည် meander ၏ impose အမြင်ကိုခံစားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မျိုးစိတ်များကိုရှာဖွေရန်ရည်ညွှန်းချက်ဖြစ်သည် griffon လင်းတ, အ အနက်ရောင်တောငန်း သို့မဟုတ် လင်းယုန်တင်သည်.
ထိုနည်းတူစွာ၊ Alagónကမ်းခြေရှိသမင်သောက်ခြင်းကိုသင်တန်ဖိုးထားရန်မလွယ်ကူပါ။ ထိုအပင်, အချိန်မီ, ကစောင့်ကြည့်ဖို့ခမ်းနား setting ကိုဖြစ်ပါတယ် အဖု။ သင်သိသည့်အတိုင်း၎င်းသည်သမင်အပူနှင့်ဆောင်း ဦး ရာသီနှင့်တိုက်ဆိုင်သည့်အချိန်ဖြစ်သည်။ အထီးများသည်အူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာအသံများကိုထုတ်လွှတ်ပြီးသမင်ဒရယ်ကိုနယ်မြေအားအမှတ်အသားပြုရန်တိုက်တွန်းခြင်းဖြင့်သဘာဝတွင်ထူးခြားသောမျက်မှန်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
သငျသညျကိုလည်း meander သူ့ဟာသူဆင်းချင်ပေမည်။ ဤကိစ္စတွင် La Antigua သို့မရောက်မီသင့်တွင်ဤသဘာဝဖြစ်စဉ်၏အခြေစိုက်စခန်းသို့တိုက်ရိုက်သွားသောလမ်းဆုံလမ်းခွတွင်ရှိသည်။ ဤအချိန်တွင်သင်သည်ကျယ်ပြန့်သောမြင်ကွင်းကျယ်မြင်ကွင်းကိုလည်းခံစားနိုင်သည် Sierra de Béjar.
ရီယိုမာလိုမြို့မှဝေးလံသောတောတောင်ထူထပ်သောရှုခင်းများနှင့်ယင်း၏ပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပျော်မွေ့ရန်လမ်းလျှောက်သည့်လမ်းကြောင်းများစွာရှိသည်။ သူတို့တွင်ခေါ်ဆိုမှုကိုထင်ရှားစေသည် Verea de los Aceituneros။ နှင့်အတူဖော်ပြခဲ့တဲ့နေရာဒေသ join ကွိုင် နှစ်ဆယ်ကီလိုမီတာရှိတယ်။ ၎င်းကိုခြေလျင်သာမကစက်ဘီးဖြင့်သော်လည်းကောင်း၊ ကားဖြင့်သော်လည်းကောင်းပြုနိုင်သည်။ သို့သော်မည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုသင်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့် coniferous သစ်တောများကိုခံစားနိုင်သည်။
နောက်ထပ်ခမ်းနားသောလမ်းကြောင်းကတော့ တံငါသည်များ၏ Verea။ ၎င်းသည်သုံးကီလိုမီတာမျှရှည်လျားသောကြောင့် ပို၍ လွယ်ကူသည်။ ၎င်းသည်တိကျစွာရီယိုလာမှ La Antigua ၏ရှုထောင့်သို့သွားပြီးသင့်အားအံ့သြဖွယ်အသီးအရွက်များပေးသည်။
အထက်ပါအချက်များနှင့်အတူ, သင်မှတဆင့်သွားနိုင်ပါတယ် Chorreón del Tajo လမ်းကြောင်း, တစ် ဦး အထင်ကြီးရေတံခွန်၌အဆုံးသတ်; ၏ La အဆင့် de la Moraကျောက်တုံးကဲ့သို့ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများကို၎င်းအား၎င်း၏အမည်နှင့်၎င်းကိုပေးသောကျောက်တုံးများကိုသင်တွေ့ရှိလိမ့်မည် La Teja စမ်းရေတွင်း။ အတိုချုပ်ဆိုရလျှင် Melero meander သို့သင်လည်ပတ်စဉ်သင်လုပ်နိုင်သောအခြားလုပ်ဆောင်မှုများမှာငါးဖမ်းခြင်းနှင့်ကနူးလှေသို့မဟုတ်ကျားနားသို့သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုသူအပေါင်းတို့သည်တစ် ဦး နှိုင်းယှဉ်ပတ်ဝန်းကျင်၌တည်၏။
ဘူမိဗေဒနည်းနည်း - အမဲလိုက်ကိုမည်သို့ဖွဲ့စည်းခဲ့သနည်း
တကယ့်ကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတာကသူ့ရဲ့ထူးခြားတဲ့ရှုခင်းကိုခံစားဖို့ပါ။ ဤသဘာဝဖြစ်ရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ သီအိုရီအမြောက်အများရှိသည်။ သို့သော်ဘူမိဗေဒနှင့်ဆက်နွယ်သူကမူ၎င်း၏မူလအစသည်မြေပြင်ပေါ်တွင်ရှိသောအတားအဆီးများနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, သဲ bar ။ ၎င်းတို့သည်မြစ်၏စီးဆင်းမှုကိုရှောင်ရှားရန်လမ်းကြောင်းပြောင်းစေပါသည်။ ထို့အပြင်တိုက်စားမှုကြောင့်ကျန်ရှိနေသေးသောကျန်ရှိနေသေးသောရေလမ်းကြောင်းကိုပြုပြင်ရန်လုပ်ဆောင်သည်။
Melero ၏ meander ကိုဘယ်သွားရမလဲ
သငျသညျ meander ကြည့်ဖို့လာရန်တစ်နှစ်၏မည်သည့်အချိန်မဆိုကောင်းပါတယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုအရာကိုလုပ်ရန်သင့်အားအကြံပေးပါသည်၊ နွေ ဦး သို့မဟုတ်ကျလိမ့်မည်။ အကြောင်းပြချက်မှာအလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။ မြစ်ရေပိုမိုသယ်ဆောင်လာသည်နှင့်အမျှ၎င်းမျဉ်းကွေးနှင့်ပြီးစီးသွားသောကျွန်းငယ်လေးကိုပိုမိုတန်ဖိုးထားလေးမြတ်ပါသည်။
Melero meander ပတ်ပတ်လည်ဘာလုပ်ရမလဲ
ခင်ဗျားတို့ကိုရှင်းပြခဲ့သလိုဒီသဘာဝအံ့သြဖွယ်ရာဟာဒေသအလယ်ပိုင်းမှာဖြစ်တယ် Las Hurdes နှင့်ပိုပြီးအထူးသ၏မြှို့နယ်အတွက် Morisco လမ်း။ အနီးဆုံးလယ်ယာမြေဒါမှမဟုတ်ကျေးရွာငယ်လေးတစ်ခုပါ Ríomalo de Abajoဘယ်မှာသင်သွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ် ဝမ်းနည်းခြင်း၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၏ဘုရားကျောင်း, ထိုအမည်တူ၏အပျိုကညာ၏မြို့, နာယကသူတော်စင်၏နေရာဖြစ်သည်။
သို့သော်ဤ Hurdan လယ်ယာအိမ်များ၏မီးမောင်းထိုးပြသည် လူကြိုက်များဗိသုကာ။ အိမ်များကိုကျောက်တုံးကျောက်ခဲများဖြင့်တည်ဆောက်ထားပြီးအမိုးများကိုလည်းအတူတူပင်ပြုလုပ်ထားသည်။ ကျွမ်းကျင်သူများအဆိုအရအိမ်များဆောက်လုပ်ခြင်းသည်ဤကျွန်းဆွယ်၏အနောက်မြောက်ဖက်ရှိပိုလိုဇာနှင့်ဆက်နွယ်ပြီးရောမခေတ်မတိုင်မီကဆဲလ်တစ်နှင့်သက်ဆိုင်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ Caminomorisco ရှိမြူနီစီပယ်ရှိအခြားသောခြံများတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောအထိမ်းအမှတ်အဆောက်အ ဦး များကိုလည်းတွေ့နိုင်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် Cambroncino မင်းမှာရှိတယ် Santa Catalina သို့မဟုတ် Las Lástimasတို့၏ဘုရားရှိခိုးကျောင်းဒေသတစ်ခုလုံးတွင်အရေးအကြီးဆုံးအနုပညာအဆောက်အအုံဖြစ်သော ၁၈ ရာစုတွင်တည်ဆောက်ခဲ့သည်။
နိဂုံးချုပ်မှာ အဆိုပါ Melero ၏ meander ၎င်းသည်ထူးခြား။ အံ့မခန်းဖွယ်ကောင်းသောရှုခင်း၊ သဘာဝတရား၏သဘာ ၀ ပတ် ၀ န်းကျင်ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ပြီးတော့သူ့ဘေးနားကဒေသကိုသင်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ် Las Hurdes၎င်း၏ရိုးရာဗိသုကာထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဒီareaရိယာကိုခရီးသွားရတာနဲ့မတူဘူး Estremadura? ဒီဟာတစ်လှမ်းသာကွာဝေးသည်
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » Getaways ဥရောပ » Espana » Melero meander
သင်လည်ပတ်သင့်ကြောင်းAlmería၏ Nudist ကမ်းခြေ